ምሳሌ 10 NASV – Mmɛbusɛm 10 ASCB | Biblica
ምሳሌ 10 NASV – Mmɛbusɛm 10 ASCB
Ɔba nyansafoɔ ma nʼagya ani gye,
na ɔba kwasea brɛ ne maame awerɛhoɔ.
2Ɛkwan bɔne so ahonya nni boɔ,
nanso tenenee gye onipa firi owuo mu.
3Awurade remma ɛkɔm nne ɔteneneeni
na omumuyɛfoɔ deɛ ɔka nʼadepa gu.
nanso nsiyɛfoɔ nsa de ahonya ba.
5Deɛ ɔboaboa nnɔbaeɛ ano wɔ ahuhuro berɛ no yɛ ɔba nyansafoɔ
na deɛ ɔda wɔ twaberɛ mu no yɛ ɔba nimguaseni.
6Teneneefoɔ hyɛ nhyira kyɛ
na akakabensɛm ayɛ omumuyɛfoɔ anom ma.
7Ɔteneneeni nkaeɛ yɛ nhyira,
na omumuyɛfoɔ din bɛporɔ.
8Akoma mu nyansafoɔ tie ɔhyɛ nsɛm,
na ɔkwasea kasafoɔ hwe ase.
9Ɔnokwafoɔ nante dwoodwoo,
na deɛ ɔfa akwan kɔntɔnkye so no ho bɛda adi.
10Deɛ ɔde nitan bu nʼani no de ɔhaw ba,
11Ɔteneneeni anom yɛ nkwa asutire,
12Ɔtan hwanyan mpaapaemu,
nanso ɔdɔ kata mfomsoɔ nyinaa so.
13Wohunu nyansa wɔ nhunumufoɔ anom,
na abaa fata deɛ ɔnni atemmuo akyi.
14Anyansafoɔ kora nimdeɛ,
nanso ɔkwasea ano frɛfrɛ ɔsɛeɛ.
15Adefoɔ ahonya yɛ wɔn kuropɔn a wɔabɔ ho ban,
nanso ahiafoɔ hia yɛ wɔn asehweɛ.
16Ateneneefoɔ akatua de nkwa brɛ wɔn,
na deɛ amumuyɛfoɔ nya no de asotwe brɛ wɔn.
17Deɛ ɔtie nteteeɛ pa no kyerɛ nkwa kwan,
na deɛ ɔpo ntenesoɔ no di afoforɔ anim yera ɛkwan.
18Deɛ ɔkata nitan soɔ no yɛ ɔtorofoɔ,
na deɛ ɔdi nsekuro no yɛ ɔkwasea.
19Mfomsoɔ mpa ɔkasa bebree mu,
na deɛ ɔkora ne tɛkrɛma no yɛ onyansafoɔ.
20Ɔteneneeni tɛkrɛma yɛ dwetɛ amapa
nanso omumuyɛfoɔ akoma nni boɔ.
21Teneneefoɔ ano ho mfasoɔ ma bebree aduane,
na atemmuo a nkwaseafoɔ nni enti wɔwuwu.
na ɔmmfa ɔhaw biara nka ho.
23Bɔneyɛ yɛ anigyedeɛ ma ɔkwasea,
nanso deɛ ɔwɔ nimdeɛ anigyeɛ wɔ nyansa mu.
24Deɛ amumuyɛfoɔ suro no bɛba wɔn so;
na deɛ teneneefoɔ pɛ no, wɔde bɛma wɔn.
25Sɛ ahum no bɛtwam a, amumuyɛfoɔ yera,
nanso teneneefoɔ gyina hɔ pintinn afebɔɔ.
26Sɛdeɛ nsã kekakeka ka ɛse, na wisie kɔ ani no,
saa ara na ɔkwadwofoɔ yɛ ma wɔn a wɔsoma noɔ.
nanso wɔtwa amumuyɛfoɔ nkwa so.
28Teneneefoɔ anidasoɔ de ahotɔ ba,
nanso amumuyɛfoɔ anidasoɔ nkɔsi hwee.
29Awurade ɛkwan yɛ dwanekɔbea ma ɔteneneeni,
nanso ɛyɛ ɔsɛeɛ ma wɔn a wɔyɛ bɔne.
30Wɔrentɔre teneneefoɔ ase da,
nanso amumuyɛfoɔ renka asase no so.
31Nyansa firi teneneeni anom ba
nanso tɛkrɛma a ɛdaadaa no wɔbɛtwa atwene.
32Teneneefoɔ ano nim adeɛ a ɛfata
na omumuyɛfoɔ ano nim deɛ ɛyɛ nnaadaasɛm nko ara.
ASCB : Mmɛbusɛm 10